Par Taratra sur 03/06/2016
Nankatoavin’ny filankevitry ny minisitra, omaly teny Iavoloha ny lalànan’ny fifandraisana sy ny serasera. Haroso hodinihina sy holanian’ny Antenimierampirenena izany amin’izao fotoam-pivorian’izy ireo izao. Anisan’ny misongadina ao anatin’ity volavolan-dalàna ity ny tsy fanagadrana mpanao gazety saingy sazy andoavany vola kosa raha miseho ny tsy fanarahan-dalàna eo am-panaovana ny asany.
Nitarika ny filankevitry ny governemanta, afakomaly teny Mahazoarivo ny minisitra eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika misahana ny tetikasan’ny filoham-pirenena, Narison Rafidimanana. Misolo toerana vonjimaika ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana, tsy eto an-toerana ny tenany. Mbola niatrika izany koa tamin’ny filankevitry ny minisitra, omaly teny Iavoloha.
Niompana tamin’ny fanendrena tompon’andraikim-panjakana ambony ny filankevitry ny minisitra. Anisan’ny nahitana izany ny teo anivon’ny minisiteran’ny Paositra sy ny minisiteran’ny Tanora. Manampy ireo ny fampitam-baovao amin’ireo fivoriana iraisam-pirenena… Tsy voaresaka ny sosialim-bahoaka.